Malunga nathi - SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD
SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD kunye negama lokuthengisa ICORENTRANS®, njengomthengisi oqeqeshiweyo wezixhobo zokwenza intsimbi kunye nezisombululo ezihlanganisiweyo. Oko yasekwayo ngo-2010,ICORENTRANS® izibophelele ekuboneleleni ngomgangatho ophezulu koomatshini bentsimbi kunye nezisombululo ezihlanganisiweyo. Iimveliso eziphambili zibandakanya ulayini osikiweyo, umgca osikiweyo wobude, umatshini wokushicilela, ityhubhu kunye nepayipi yombhobho, i-ERW Tube Mill, intsimbi engenasici engenanto, izixhobo zokuphelisa ityhubhu, umatshini wokuzoba ucingo, izixhobo zokwenza izixhobo, umgca wee-electrode, iindawo zokugcina izinto zeshishini izinto ezisetyenziswayo.
Sisoloko sijolise kwixabiso labathengi kunye neemfuno, sizibophelele ekunikezeleni umgangatho ophezulu kunye nezixhobo ezifanelekileyo kunye neeprojekthi zokunceda abathengi ukuba bandise izibonelelo kwaye basombulule ngokukhawuleza iingxaki zemveliso yendawo. Kwiminyaka elishumi yophuhliso, abathengi bethu abaziwayo e-Afrika, Middle East, South Asia, nase Melika bakhula baba ngabona bakhuphiswano bakhuphisanayo ekuhlaleni.
Olona loncedo lubalulekileyo lweCORENTRANS®iguquka ngexesha elifanelekileyo kunye nenkonzo efanelekileyo. Thembela kwiqela lobunjineli, kwaye siya kubonelela ngokubonisana ngaphambi kokuthengisa, iingxelo malunga nokuba kunokwenzeka, kunye nokukhethwa koomatshini, umatshini ngamnye othengisiweyo kunye nefayile eyodwa kubo bonke abathengi ukubonelela ngenkonzo yexesha elide kunye nokubonelelwa kwezahlulo.
Ngokusekwe e-China, i-mission yethu kukuqonda ubumbano lwehlabathi lwezixhobo zemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nezisombululo!
Enkosi ngosinaka ixehsa lakho! ICORENTRANS® ujonge phambili ekuzuzeni ukuxhamla kunye nokusebenzisana ixesha elide!
Umzi mveliso wethu unenkqubo yolawulo ye-6S ukunciphisa umjikelo wokusebenza, ukunciphisa iindleko zemveliso, ukuphucula ukusebenza kwemveliso, ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Ukulawula ngokufanelekileyo izinto zemveliso ezinje ngabantu, oomatshini, izixhobo kunye neendlela kwindawo yemveliso ukuphucula umgangatho wonke womsebenzi. Ukuqonda okubanzi kweemfuno zabathengi, ukubonelela ngokuchazwa kobuchwephesha kunye nokuphendula imibuzo kubathengi.
Umbutho ophakamileyo wezobugcisa owenza uphando, uphuhliso kunye nokuveliswa koomatshini bokulungisa intsimbi eShanghai. Ngexabiso elifanelekileyo, ulawulo lomgangatho osezingeni laseYurophu, i-7 * 24 yexesha lonke lenkonzo yasemva kokuthengisa, ukubonelela ngezixhobo.
Oomatshini. Isisombululo. Izinto
Isinyithi esikumgangatho ophezulu
oomatshini kunye nesisombululo esidibeneyo
Ixabiso elifanelekileyo, ukuhanjiswa okukhawulezayo, ukusebenza okuzinzileyo, kunye nokubuyisa ngokukhawuleza,
Esona sisombululo sisiso!